आजदेखि एमालेकाे १०औँ महाधिवेशन - Updatekhabar.com Updatekhabar.com
आजदेखि एमालेकाे १०औँ महाधिवेशन
१० वटा महाधिवेशन कहाँ कहाँ भए, कसले लिएका थिए नेतृत्व ?
चितवन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आज शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ ।
एमालेले पर्यटकीय नगरी चितवनमा पहिलो पटक पार्टी महाधिवेशन गर्न लागेको हो । महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको एमालेले जनाएको छ ।
महाधिवेशनको उद्घाटन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मध्याह्न १२ः००बजे गर्ने कार्यक्रम रहेको एमालेले जनाएको छ ।
आज शुक्रबार मङ्सिर १० गते नारायणी नदी किनारमा महाधिवेशन उद्घाटन तथा ११ र १२ गते सौराहामा बन्दसत्र एवं नेतृत्व चयन गर्ने एमालेको तयारी छ ।
महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिका सहसंयोजक सुरेन्द्र पाण्डेले उद्घाटन कार्यक्रमका लागि देशभरबाट उपस्थित हुने पाँच लाखभन्दा बढी सहभागी हुने बताउनुभयो ।
उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत सात पार्टीका प्रमुख नेता सहभागी हुनेछन् । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा, राजमोबाट चित्रबहादुर केसी र नेमकिपाका नेता समेत उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुने जनाइएको छ  ।
महाधिवेशन उद्घाटनको लागि एमालेले नारायणी नदी किनारमा भव्य सजावटसहितको मञ्च बनाएको छ ।
सहभागीलाई लक्षित गरी एमालेले विभिन्न ठाउँमा प्रत्यक्ष प्रसारण अवलोकनका लागि ठूलाठूला डिजिटल बोर्ड समेत राखेको छ ।
महाधिवेशनमा भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, कम्बोडियालगायत देशबाट प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । कतिपय मुलुकका पार्टीले भने कोरोनाको कारणदेखाउँदै भिडियो सन्देशहरु पठाइरहेका छन् ।
महाधिवेशनमा दुई हजार १७५ प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । भूगोल, जनसङ्गठन विभाग, सम्पर्क कमिटी र प्रवासबाट र पाँच प्रतिशत मनोनीत (१०६ जना) गरी दुई हजार १७५ प्रतिनिधि र १०३ पर्यवेक्षक सहभागी हुने एमालेले जनाएको छ । एमालेका सल्लाहकार १५ जना र पाका पुराना नेतासमेत पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी हुने एमालेले जनाइएको छ ।
कुल प्रतिनिधिमा ६२७ जना महिला र २०९ दलित प्रतिनिधि रहेका छन् । महिला प्रतिनिधित्व ३० प्रतिशतभन्दा बढी र दलित प्रतिनिधित्व १० प्रतिशतभन्दा बढी भएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
एमाले १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा जनताका झुपडीदेखि सहरका भव्य पे्रक्षालयसम्म आफ्नो महाधिवेशन गरिसकेको छ । २००६ साल वैशाख १० गते पुष्पलाल श्रेष्ठले स्थापना गर्नुभएको पार्टीको मूलधारका रूपमा एमालेले आफूलाई व्याख्या गर्दै आएको छ । २०१० साल माघ १० देखि २० गतेसम्म पाटनको ललितपुर र काठमाडौँमा नेकपाको प्रथम महाधिवेशन भएको थियो । जुन महाधिवेशनले मनमोहन अधिकारीलाई महामन्त्रीमा चुनेको थियो ।
त्यस्तै २०१४ साल जेठ १५ देखि २५ गतेसम्म दरबारमार्गस्थित फोहरा दरबारमा नेकपाको दोस्रो महाधिवेशन भयो । त्यस्तै २०१९ साल वैशाख ४ देखि १५ गतेसम्म तेस्रो, २०४६ भदौ ९ देखि १४ गतेसम्म, सिरहाको विष्णुपुरकट्टी र सर्रे अम्बासमा तत्कालीन मालेको चौथो महाधिवेशन भयो । जुन सम्मेलनबाट मदनकुमार भण्डारी महासचिवका रूपमा उदाउनुभयो । त्यस्तै २०४९ माघ १४ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँमा पाँचौँ, २०५४ माघ १२ देखि १८ गतेसम्म नेपालगञ्जमा छैटौँ, २०५९ माघ १८ देखि २२ गतेसम्म जनकपुरमा सातौँ, २०६५ फागुन ५ देखि १४ गतेसम्म बुटवलमा आठौँ र २०७१ असार १९ देखि साउन १ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा नवौँ महाधिवेशन भएका थिए ।
१० वटा महाधिवेशन कहाँ कहाँ भएका थिए, कसले नेतृत्व लिएका थिए ? हेरौं शब्दचित्र-
स्थापनाः विसं २००६ वैशाख १० गते
संस्थापक नेता– पुष्पलाल
विसं २०१० माघ १० –२० गते
पाटन, ललितपुर र काठमाडौं
महामन्त्री– मनमोहन अधिकारी
विसं २०१४ जेठ १५ – २५ गते
दरबारमार्गस्थित फोहरादरबार, काठमाडौँ
महासचिव– डा केशरजङ्ग रायमाझी
विसं २०१९ वैशाख ४ –१५
महासचिव– तुल्सीलाल अमात्य
विसं २०४६ भदौ ९ – १४ गतेसम्म, सिरहाको
विष्णुपुरकट्टी, सर्रे अम्बास
महासचिव– मदनकुमार भण्डारी
विसं २०४९ माघ १४ – २० गते
दशरथ रङ्गशाला–कमलादी, काठमाडौँ
मूल नारा–‘जडसूत्रवाद र विसर्जनवादको विरोध गरौँ,
माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास गरौँ
अध्यक्ष– मनमोहन अधिकारी, महासचिव– मदनकुमार भण्डारी
विसं २०५४ माघ १२ – १८ गते, नेपालगञ्ज, बाँके
मूलनारा–‘विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध सङघर्ष गरौँ,
विचारधारात्मकरुपमा पार्टीलाई एकताबद्ध पारौँ
अध्यक्ष– मनमोहन अधिकारी, महासचिव–माधवकुमार नेपाल
विसं २०५९ माघ १८ – २२ गते, जनकपुर, धनुषा
मूल नारा– ‘प्रजातन्त्र, शान्ति र समग्र विकास,
प्रतिगमनविरुद्ध अग्रगामी निकास !’
महासचिव–माधवकुमार नेपाल ।
विसं २०६५ फागुन ५– १४, बुटवल, रुपन्देही
मूल नारा– ‘‘यथास्थिति, अराजकता र विखण्डनका विरुद्ध आठौँ महाधिवेशन, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक रूपान्तरण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि नयाँ संविधान !’
अध्यक्ष – भलनाथ खनाल, महासचिव– ईश्वर पोखरेल
विसं २०७१ असार १९ – साउन १ गते, भृकुटीमण्डप, काठमाडौँ
मूल नारा– ‘शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरौँ, जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समृद्ध नेपाल निर्माण गरौँ !’
अध्यक्ष– केपी शर्मा ओली, महासचिव– ईश्वर पोखरेल
प्रथम विधान महाधिवेशन
विसं २०७८ असोज १५ – १७, गोदावरी, ललितपुर
नीति, सङ्गठन र विधानसम्बन्धी दस्तावेज पारित
मूल नारा–‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौँ, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौँ !’
विसं २०७८ मङ्सिर १० – १२ गते, नारायणगढ र सौराहा, चितवन
मूल नारा– ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौँ, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौँ !’